Daawo: Trump Oo Xaalad deg deg ah uga dhawaaqay Gobolka Florida Kadib Duufaanta Irma ay Cagta Marisay Miami.
Monday September 11, 2017 - 12:12:20 in Wararka by Super Admin
Wadanka Mareykanka qeybo kamid ah wali waxaa jirta xaalad aad u adag kadib markii duufaano laayaan ah ay ku dhufteen.
Wararka ka imaanaya gobolka Florida ayaa sheegaya in duufaanta Irma ay cagta marisay dhowr magaalo oo katirsan gobolkaas waxaana socda barakac xooggan oo ay sameynayaan malaayiin qof oo kunool magaalooyinka waaweyn ee gobolka sida Magaalada Miami oo kale.
Guddoomiyaha gobolka Florida ayaa sheegay in duufaanta Irma ay cagta soo marisay xeebaha Koonfureed ee gobolka islamarkaana biyaha ka dhashay duufaanta roobka wadata ay qariyeen malaayiin guri oo dad shacab ah deganaayeen iyo xarumo dowladeed.
Magaalada Miami waxaa laga daad gureeyay dad ka badan 6 milyan oo qof waxaana lasaadaalinayaa in dad ka badan 11 milyan ay banaanyaal u noqdaan duufaanta Irma ee kusii fidaysa gobollo hor leh oo dalka Mareykanka katirsan.
Hoggaamiyaha cunsuriga Mareykanka Donald Trump ayaa xaalad degdeg ah uga dhawaaqay gobolka Florida wuxuuna ugu baaqay shacabka Mareykanka in ay gurmad dheeri ah udireen gobolka si loo badbaadiyo malaayiin qof oo noloshoodu halis kujirto.
Duqa magaalada Miami wuxuu warbaahinta u sheegay in 2 milyan oo guri ay korontadu ka go’day islamarkaana ay magaaladaasi isku bedeshay lama degaan, biyaha ayaa dhax ceegaago dhammaan farasu magaalaha caanka ah.
Muuqaallo lagu baahiyay baraha Bulshada ayaa muujinayay magaalada Miami oo isku bedeshay Wabi sababa la xiriira biyaha oo joog sare gaaray waxaana laga cabsi qabaa in dhismayaasha qadiimiga ah dummaan haddii duufaantu saacado badan qaaadato.
90% dadkii deganaa magaalooyinka Florida ayaa dibadda loo saaray, saldhigyo ciidamo Mareykan ah ay kulahaayeen gobolkaas ayaa labaneeyay sababa laxiriira cabsi laga qabo in roobabka duufaanta Irma ay waxyeeleeyaan askarta iyo saraakiisha.
Dhammaan duulimaadyadii diyaaradaha madaniga ee gobolka Florida ayaa hakad kujira sidoo kale Tareenada ayaa joogsaday, isku geyn ahaan khasaaraha ka dhashay duufaantan ayaa lagu qiyaasayaa 200 bilyan oo dollarka Mareykanka ah, hay’adda musiibooyinka Mareykanka waxay sheegtay in duufaantan ay tahay middii ugu xooganeed ee wadanka soo marta.
Duufaantii dhowaan ku dhufata gobolka Taksis ayaa dishay dad ka badan 32 qof halka khasaaraha maaliyadeed uu gaarsiisanyahay 180 Bilyan oo dollar.
Hoos Ka Daawo Muuqaal Cajiib ah oo ku saabsan Magaalada Miami oo biya fadhiisad isku bedeshay.